WARBIXIN: Hawl-Galada Bedelka Gerard Pique Oo Halkooda Kasii Socda & Xiddigaha Booskii Uu Ka Baneeyay Xulka Spain Loo Qal-qaalinayo Oo LIX Xiddig Gaadhay. – GOOL24.NET
WARBIXIN: Hawl-Galada Bedelka Gerard Pique Oo Halkooda Kasii Socda & Xiddigaha Booskii Uu Ka Baneeyay Xulka Spain Loo Qal-qaalinayo Oo LIX Xiddig Gaadhay.
Tababaraha xulka qaranka Spain ee Luis Enrique ayaa u muuqda mid halkiisa kasii wada hawl-galada uu ku doonayo inuu buuxiyo booska uu dhawaan xulka ka baneeyay daafaca Barcelona ee Gerard Pique.
Helista daafac dhexe oo lamaane wanaagsan la noqda Sergio Ramos ayaa ah mid kamid ah sheekooyinka ugu xiisaha badan ee ka dhex taagnaa xulka La Roja tan iyo markii xilka tababarenimo loo magacaabay Luis Enrique.
Daafaca Barcelona ayaa laalay kabihiisa xulka qaranka kaddib bandhigii qalbi jabka lahaa ee xulka kusoo maray tartankii Koobka Aduunka ee ka qabsoomay dalka Ruushka.
Enrique ayaa tan iyo bishii September magacaabay saddex liis oo kala duwan isaga oo xulka uga wacay lix daafac dhexe oo uusan qayb ka ahayn Ramos waxaana ay lixdaas daafac kala yihiinMarc Bartra, Nacho, Raul Albiol, Ínigo Martinez, Diego Llorente iyo Mario Hermoso.
Saddex kamid ah lixdaas daafac ayaa qayb ka ah xulkii ugu dambeeyay ee uu tababaruhu ku dhawaaqay shalay halka saddex kale laga soo tagay.
Xiddigahaas loo tababarayay buuxinta booska Gerard ayuusan midkoodna ku raaxaysan bandhigyo joogto ah afarta kulan ee uu Enrique xulka hoggaaminayay, Nacho ayaa dheelay saddex kulan balse waxa dib udhac ku ah inuusan ka muuqan xulka haatan.
Raul Albiol ayaa sidoo kale ka garab ciyaaray Ramos kulankii Wales balse waxa haatan xulka looga wacay laba waji oo cusub oo kala ah Diego Llorente iyo Mario Hermoso oo kamid ah daafacyada wacdaraha dhigaya xilli ciyaareedkan.
Diego Llorente ayaa lagu soo daray xulka isaga oo dhaawacan waana talaabo si aad ah cadayn ugu ah inuu haysto taageerada tababarihii hore ee Barcelona waxaana la filayaa inuu fursad heli doono kulamada Croatia iyo Bosnia.
Sidoo kale xiddigaha Hermoso oo ah daafac bandhig wacan u samaynaya Espanyol iyo Yeray ayaa ah xiddigaha kale ee ay tahay inu Enrique uu ku xisaabtami doono.